Ball Valve Ball iyo Trunnion Nidaamka Tijaabada Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska-Qodobbada Farsamada-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve waa sumadeena)
Ball Baalayaasha sabayn iyo Nidaamka Tijaabada Cadaadiska Cadaadiska Cadaadiska ee Trunnion
Waqtiga: 2020-09-30 Hits: 82
1.Baadhitaanka xoog ee waalka kubbadda sambabaha waa in lagu tijaabiyaa kubbadda badhkeed oo furan.
1.1 Tijaabada Titan Floating Ball cidhiidhida cidhiidhiga: waalka ayaa ku jira xaalad badh furan, dhexdhexaadka tijaabada ayaa lagu soo bandhigayaa hal dhinac, dhamaadka kalena waa la xidhay; kubbadda waa la rogaa dhowr jeer, dhammaadka xirnaana waxaa loo furaa kormeer marka waalka uu ku jiro xaaladda xiran, iyo waxqabadka xiridda ee xirxirashada iyo goomaha ayaa la hubiyaa. Waa inaysan jirin wax daadanaya. Dhexdhexaadinta tijaabada ayaa markaa laga soo saaray dhinaca kale iyo imtixaanka kor ku xusan ayaa lagu soo celiyay.
1.2 Tijaabada Titan Trunnion Mounted Testing cidhiidhi ah: Tijaabada ka hor, isku shaandhee kubbadda aan culeyska la saarin dhowr jeer, waalka kubbadda go'an ayaa la xirayaa, qalabka baaritaanka waxaa laga soo bandhigayaa min daraf ilaa qiimaha la cayimay; ku hubi waxqabadka qufulka ee tubada iyada oo la adeegsanayo qiyaasta cadaadiska. Saxnaanta cabbirka cadaadiska waa 0.5 illaa 1 baaxadduna waa 1.6 jeer cadaadiska baaritaanka. Waqtiga la cayimay, haddii uusan niyad jab jirin, waa u qalmaa; ka dib dhexdhexaadka tijaabada ayaa laga keenayaa dhinaca kale, imtixaanka kor ku xusanna waa lagu celinayaa. Kadib, waalka wuxuu kujiraa xaalad nus furan, darafyadiisa waa xiranyihiin, godka gudaha waxaa laga buuxiyay qalabka dhexdhexaadka ah, xirxirida iyo goomaha waxaa lagu baarayaa cadaadiska tijaabada, waana inaysan jirin wax daadanaya.
Nidaamka Tijaabada Loo Yaqaano Flange Ball Madax
2.1 Tijaabada Shell Hydro-static
Iyada oo waalka qayb ahaan furan, ku buuxi jirka waalka biyo kadibna mari cadaadiska tijaabada ee lagu muujiyay
Jadwalka 1. Hubso in waalka uu dhammaado ka dib si aad u hubiso dhammaan xubnaha ku soo biiraya iyo dusha sare ee jirka si loo hubiyo in eber ay ka soo daadanayaan oo dhammaan qeybaha ay yihiin baxsi la'aan.
Muddada imtixaanku waa inay ahaato sida ku cad Shaxda 2.
Jadwalka 1 Shell Test ee ASME B16.34 [Unit MPa]
Waxyaabaha Tijaabada Shell 150LB 300LB 600LB
Jadwalka 2 Muddada tijaabada ee tijaabada qolofta iyo xiritaanka [halbeegga min]
Cabirka (NPS) Tijaabada qolofta Hydrostatic Cadaadiska Sare ee baaritaanka xiritaanka waalka (Hydrostatic) Tijaabada xiritaanka waalka Cadaadiska (Gaas)
2.2 Imtixaanka Kuraasta Cadaadiska Cadaadiska Sare (Hydrostatic)
Iyada oo waalka si buuxda u xiran yahay, tijaabi labada jiho. Hal jiho mar kasta oo cadaadis ku jiro Jadwalka
Iyada oo waalka si buuxda u xiran yahay, tijaabi labada jiho. Hal jiho mar kasta oo cadaadis ku jiro Shaxda 3. Hubso in eber uu ku soo daadanayo aagga oo dhan.
Muddada baaritaanka waa in lagu muujiyaa shaxda 3
Birta birta ah iyo birta biraha ka sameysan ee birta ah, walxaha chloride ee ku jira biyaha tijaabada waa inuusan ka badnaan 30 ppm.
Jadwalka 3 Cadaadiska waalka (ASME B16.34) [unit MPa]
Cabbirka (NPS) Cadaadiska 150LB 300LB 600LB
2.3 Tijaabada Kuraasta Cadaadiska Cadaadiska Hoose (Gaas)
Iyada oo waalka si buuxda u xiran yahay, tijaabi labada jiho. Hal jiho mar kasta oo cadaadiskiisu yahay 0.6MPag. Hubso in eber uu ku sii daadanayo aagga oo dhan.
Muddada baaritaanka waa in lagu muujiyaa shaxda 2
2.4 Shuruudaha Aqbalaada ee Imtixaanka Xiritaanka (ISO5208)
kursiga Kursi jilicsan Bir Fadhi
Heerka baxsiga 0 Baxsiga (A) > = 01mm3 / SxDN (D)
2.5 Baaritaanka Cadaadiska Kadib
Biyaha baaritaanka waa in gebi ahaanba laga daadgureeyaa ceelka waalka.
Tuulooyinka birta ee kaarboon kaar ah, gudaha waalka waa in lagu buufiyaa ama lagu dahaadhaa saliid ka hortag ah miridhku si looga hor tago miridhku iyo daxalka inta lagu jiro safarka iyo kaydinta.
Hore: Mabaadi'da Xulista Noocyada Dhismaha Ball Valves
Xiga: 5 Naqshadeynta Dusha Ball Valve Kala Duwan